नेपालमा ३१६ जना कोरोना संक्रमित थपिए, संक्रमितको संख्या १३५६४ पुग्यो (कुन जिल्लामा कति नयाँ संक्रमित ?) – Himalaya Television
नेपालमा ३१६ जना कोरोना संक्रमित थपिए, संक्रमितको संख्या १३५६४ पुग्यो (कुन जिल्लामा कति नयाँ संक्रमित ?)
२०७७ असार १६ गते १६:४१
१६ असार, २०७७ काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३१६ जना कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ७१ महिला र २ सय ४५ पुरुष गरी ३ सय १६ जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या मंगलबारसम्म १३ हजार ५ सय ६४ पुगेको छ । जसमा महिला १ हजार ६ सय ५७ र पुरुष ११ हजार ९ सय ७ रहेका छन् । मंगलबार सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा १ सय २१ जनामा संक्रमण देखिएको छ । त्यहाँ २ हजार ४ सय ५७ जना कुल संक्रमित रहेका छन् ।
यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा आज ४७ जना गरी ३ हजार ८ सय ७ जना संक्रमित रहेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा आज ८२ गरी कुल ३ हजार ७ सय ९४, गण्डकी प्रदेशमा आज २५ सहित आजसम्म १ हजार १७, कर्णाली प्रदेशमा आज १३ गरी १ हजार ४ सय ३६ जना संक्रमित रहेका छन् । यस्तै प्रदेश नम्बर १ मा आज १२ गरी कुल ५ सय ९५ र बागमती प्रदेशमा आज १६ गरी कुल ४ सय २८ जना संक्रमित रहेका छन् ।
पीसीआर विधिबाट पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार ७ सय ११ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ । अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट २ लाख २८ हजार ३ सय ४१ जनाको परीक्षण भएको छ ।
यस्तै आरडिटी विधिबाट आजसम्म २ लाख ९७ हजार ८ सय ७१ जनाको परीक्षण भएको छ ।
कुन जिल्लामा थपिए कति नयाँ संक्रमित ?